SomaliaReport: Dagaal Cusub oo ka Dhacay Muqdisho
By AWEYS CADDE, AK 10/27/2011
Ugu yaraan toddobo qof ayaa ku dhintay in ka badan tobanna way ku dhaawacantay ka dib markay dagaalo ku dhexmareen ciidamada Dawladda Ku Meel Gaarka (DKMG), ciidamada nabadsugida Midowga Afrika (AMISOM) iyo meleeshiyaadka Islaamiga ah magaalada Muqdisho xalay.
Dagaal kharaar ayaa ka dillaacay ka din markay dagaalyahanada al-Shabaab weerareen saldhigyada DKMG iyo AMISOM eek u yaal degaanada Eveco, Bangala iyo Xoosh ee Dayniile iyo Dharkiinley.
“Dagaal kharaar ayaa bilowday 11:00pm, socdayna ilaa 1:00am; saaka subaxnimadii hore waxaan arkay shan meyd ah, saddex waxay ahaayeen al-Shabaab labada kalana shacab,” Safiyo Daa’uud oo ka mid ah dadka degan Dayniile ayaa Somalia Report u sheegtay.
Dagaal kale oo ka dhacay xaafadda Xoosh ee degmada Dharkiinley, waxaa ku dhintay labo shacab ah shanna way ku dhaawacantay.
“labo ruuf oo ka tirsan hal qoys ayaa geeriyooday markii gurigooda madfac ku dhacay...dagaalku wuu cuslaa labada dhinacna waxay adeegsadeen madfacyo, ma aanan seexan xalay oo dhan,” Maxamed Cali Nuur oo ku sugan Dharkiinley ayaa Somalia Report u sheegay.
Hoggaamiye ku Xigeenka Ciidamada Qaranka Soomaaliyeed, Cabdiraxmaan Yuusuf Dhego Badan, ayaa u xaqiijiyey Somalia Report laakiinse wuu ka gaabsaday inuu sii faahfaahiyo.
DKMG iyo AMISOM waxay isku dayayeen inay ka takhalusaan haraaga dagaalyahanada al-Shabaab ee caasimada, laakiinse fallaagadu waxay muujisay inay mowqif taagan yihiin.
Xamaasada Jubbada Hoose iyo Gedo oo Kacsan
Hadda, xamaasada degmada Afmadow aad ayey u kacsan tahay kadib markii ay ciidamada dowladda Soomaaliyeed iyo militariga Keenya ay kusoo dhawaadeen degaanada iyo al-Shabaab oo ciidamo kusoo daad guraysay aagagaas.
“Boqolaal dagaalyahanada al-Shabaab ee kasoo jeeda Baay, Bakool iyo Kismaayo ayaa soo gaaray degmada maalmihii lasoo dhaafay iyadoo keentay in difaacyo weyn laga sameeyo agagaarka Afmadoow, sidoo kale ciidamada Keenya iyo DKMG ayaa saddex kiilimitir u jira degmada,” qof degan Afmadow degan ayaa Somalia Report u sheegay, siina raaciyey in dadka badidii ka baxeen degmada.
Afmadow waxay bartilmaan u tahay ciidamada Keenya iyo DKMG si ay ugu sii gudbaan Kismaayo, waxaana la rajaynayaa inay noqoto goob-dagaaleedka ugu weyn intii ay Keenya ka qaybqaadatay colaada labo todobaad ka hor.
Sheekh Mukhtaar Roobor, oo kasoo hadlay Ceelasha Biyaha, ayaa yiri Keenya waxay qaniintay in ka badan intay calalinkarto, wayna ku jabaysaa hadafkeeda milatari iyadoo gudahana ka dareemi doonta aar-goosi.
“Keenya waxay sheegtay inay qabsanayso dekadda Kismaayo,” ayuu yiri. “Al-Shabaab waxay weerari burburin doontaana hudheelada keenya, bangiyada iyo meelaha muhiimka ah ee magaalooyinka.”
Afar ruux ayaa ku geeriyooday markii RPG lagu weeraray Kenya aaga u dhow xudduda Soomaaliya Khamiistii, kuna xigtay bam-gacmeedyo ay niyadgalisay al-Shabaab oo lagu weeraray Nayroobi Isniintii.